Politika fiarovana fiainan'olona -
Fikarakarana & fitarihana
Hampitombo ny vokatra
Izay omenao anay
Fampiasana ny vaovao nangonina
Ny fomba hiarovantsika ny fampahalalana
Fitsipika ankapobeny momba ny fizarana
Ho an'iza isika dia afaka mamoaka rakitra
Ny fampahalalana ho anao dia zava-dehibe ho antsika, toy ny mahakasika anareo ary izahay dia manolo-tena hiaro ny fampahalalam-baovao. Ity Politika momba ny fiarovana ity dia mamaritra ny zavatra nangatahan'ireo CompanyHub, ny fomba famoahany ny fampahalalana amin'ny alalan'ny fitaovana dizitaly isan-karazany sy ny fomba ampiasana izany vaovao nangonina izany. Nangatahana ianao hamerina ity Politika Fiarovana ity alohan'ny (i) mampiasa ny ApplicationHub Web / Mobile apps, (ii) miditra sy manoratra amin'ny webhost companyhub.com ary / na (iii) mampiasa tranokala, , na aiza na aiza ahafahanao miditra na mampiasa azy ireo. Mba hahazoana fahatakarana tsara kokoa, ny fampiharana CompanyHub, ny vohikala sy ireo tranonkala mifandraika amin'izany, ireo fampiharana, ny serivisy sy ny fitaovana dia voatonona miaraka 'COMPANYHUB PLATFORM'.
Manolotra anao ny fahafahana mifandray amin'ny na mampiasa ny CompanyHub Platform amin'ny alalan'ny Internet. Ny fepetra voalazan'ity Politique Privacy ity dia mihatra amin'ny tranonkala CompanyHub Platform.
Amin'ny fidirana amin'ny CompanyHub Platform ary amin'ny fanomezana ny fangatahana fangatahana dia manaiky ny politikan'ny fiarovana ny tenanao ianao. Miaro ny zontsika hanova na hanao fanovana sahaza ho an'ity Politika Fiarovana ity isika, izay hahomby amin'ny famoahana azy. Hanaitaitra anao izahay raha toa ka misy fiovana goavana amin'ity Politika Fiarovana Privacy ity. Ny fampiasanao tsy tapaka ny CompanyHub Platform, aorian'ny fandraisana ny fisintonana toy izany, dia raisina ho heverina ho fanekena ny fanovana.
Ny vokatra sy tolotra omen'ny CompanyHub Platform dia tsy natao ho an'ny olona ao anatin'ny telo ambin'ny folo taona (13). Raha toa ka tsy ampy taona ianao dia mangataka anao tsy hizara ireo angona manokana na mampiasa ny Product sy / na Services.
Manangona fampahalalana omenao izahay na mamela anay hiditra. Ny fampahalalana dia mety hahitana, fa tsy voafetra ny anaranao, ny sary, ny daty nahaterahana, ny mailaka sy / na ny adiresy ara-batana, ny laharana an-telefaona ary / na ny findainao, ny lahy sy ny vavy, ny lisitry ny lisitra, ny fampahalalam-baovao sosialy sy ny mombamomba, ny fampahalalana (GPS) fampahalalana ary rehefa ilaina ny fampahalalana momba ny karama fandoavam-bola / kara-bola / kaonty amin'ny banky. Manaiky ianao fa mamoaka an'ireny fanazavana ireny an-tsitrapo. Raha tsy te havoaka ireo fampahalalam-baovao ireo ianao, izay azonao atao dia mety tsy ho azonao atao ny mampiasa tolotra sasantsasany omen'ny CompanyHub Platform.
Azontsika atao ny manangona ireto karazana fampahalalana manaraka ireto mba hanomezany anao ny fampiasana sy ny fidirana amin'ny CompanyHub Platform, ary hanampy antsika hanokana sy hanatsara ny traikefanareo:
Fampahalalana momba ny ordinateranao na ny fitaovana fidirana amin'ny CompanyHub Platform, ny adiresy IP anao, ny navigateur, ny baikon'ny navigateur, ny rafitra fandidiana, ny referrer, ny tambazotran'ny finday, ny fijerena ny takelaka, ny angon-drakitra, ny tahiry anaty aterineto.
Ny fampahafantarana omenao anao hampiarahana ny fampandrenesana isan-karazany toy ny mailaka manaraka, ny famintinana ny asa isan'andro, ny fampahafantarana ny asa, ny fampahatsiahivana ny asa, ny fampitam-baovao momba ny fanondranana entana, ny fampitam-baovao, ny faktiora ary / na ny gazetiboky ohatra ny anarana, adiresy mailaka ets.
Fampahalalana mifandraika amin'ny fividianana sy fifanakalozana miditra amin'ny CompanyHub Platform toy ny anarana, adiresy, adiresy mailaka, telefaon, details ets.
Fampahalalana amin'ny rafitra mifandray amin'ny CompanyHub Platform toy ny kaonty mailaka, kalandrie. Raha manome alalana antsika hiditra amin'ny kaonty mailaka Google / hafa ianao dia hamoaka ny resadresaky ny mailaka rehetra mandritra ny volana ses (6) farany amin'ny alàlan'ny daty fanomezan-dàlana ary mbola mitohy mandra-pialanao ny kaonty mailaka. Ny rafi-pandaharantsika dia handinika ireo mailaka ireo ary hanavaka ny fifandraisana manan-danja mifototra amin'ny resadresaka mailaka ary koa mampifandray ny mailaka miaraka amin'ny fifandraisana.
Mety ihany koa ny hanangona vaovao avy na momba anao amin'ny fomba hafa, toy ny rehefa hifandray ny mpanjifa fanohanana ekipa, rehefa mamaly ny fanadihadiana sy / na mandritra ny fifandraisana amin'ny mpikambana amin'ny varotra sy ny varotra, na ara-teknika ny fanohanana ekipa. Azontsika atao ny manara-maso na manoratra ny fifampiresahana an-telefaona misy eo aminao na ireo olona miasa ao amin'ny toeranao sy ireo mpiara-miasa aminay amin'ny tolotra anaty sy ny fampiofanana. Amin'ny fampitaovana aminay dia manaiky ianao fa ny hafatrao dia mety ho azo tsapain-tanana, manara-maso, na voarakitra tsy misy fampitandremana na fampitandremana.
Izahay (anisan'izany orinasa miara-miasa) dia afaka mametraka antontan-drakam-peo kely eo amin'ny solosainao na fitaovana hafa. Ireo tahirin-drakitra ireo dia mety ho cookies, tags piksela, Cook cookies, bibidia web (sary an'ohatra elektronika mety ampiasaina amin'ny mailaka manaraka) na ny tahiry hafa izay omen'ny browser-nao na ny fampiharana mifandraika (miaraka "Cookies"). Ampiasainay ireo Cookies ireo mba hahafantarana anao ho toy ny mpivarotra; mampifanaraka ny tolotra, ny votoaty ary ny fifandraisana; mamefy ny fahombiazan'ny fifandraisana; Ampio hiantohana ny fiarovana ny kaontinao; mampihena ny loza ary misoroka ny hosoka; ary hampiroborobo ny fitokisana sy ny fiarovana amin'ny tranokalantsika sy ny tolotra ataontsika.
Mba hanampiana anao hiaro anao amin'ny hosoka sy ny fampiasana tsy ara-dalàna ny fampahalalana manokana momba ny tenanao manokana, momba ny asa aman-draharaha, dia afaka manangona vaovao momba anao sy ny fifandraisanao amin'ny tranokalanay na ny orinasa CompanyHub Platform. Azontsika atao koa ny manombantombana ny ordinateranao, ny finday na ny fitaovana hafa fidirana mba hamantarana ny rindrambaiko na ny asa atao ratsy.
FAMPIANARANA AMIN'NY ANKAPOBENY
Ny tanjonay voalohany amin'ny fanangonana ny mombamomba ny olona manokana, matihanina ary raharaham-barotra dia manome anao ny traikefa CRM azo antoka, mahamety, mahomby ary mahomby. Ny fampahafantarana manokana omena antsika amin'ny alàlan'ny tranonkala dia ho ampiasaina raha tsy amin'ny:
Hanamboatra CompanyHub manokana ho anao;
Hanome fanohanana ny mpanjifa;
Fampahafantarana momba ny fampahafantarana sy fandefasana hafatra / fanavaozana / fampahatsiahivana momba ny fivoriana / fifandraisana;
Manoroka fifandirana, manangona fandoavan-karama, ary manahirana ny olana;
Manakana ny hetsika mety ho voarara na tsy ara-dalàna, ary hampihatra ny fepetra fampiasana;
Manamboatra, mandanja ary manatsara ny tolotra CompanyHub Platform sy ny votoatiny, ny famolavolana, ary ny fiasan'ny tranokala, ny interface, ny fitaovana ary ny fampiharana;
Avelao ny votoatin-dresaka, ny fivarotana, ny fampandrenesana vaovao momba ny serivisy, ary ny tolotra fampahafantarana mifototra amin'ny safidy mifandraika amin'ny serasera;
Mifandraisa amin'ny nomeraon'ny nomeraon'ny findainao, amin'ny fametrahana antso an-tariby na amin'ny SMS (SMS) na mailaka mailaka;
Alefaso ireo fanambarana, faktiora, fampahatsiahivana ary manangona vola avy aminao
FITORIANA SY FAMPANDROSOANA
Manangona sy manavao ny fampahalalana manokana ataonareo amin'ny alàlan'ny fampiharana nomena anay amin'ny tambajotra azo antoka "Amazon Cloud". Ny fampiantranoana ny fampiantranoana eo amin'ny toerana dia mifototra hatrany amin'ny fampihenana ny faharetana sy ny fahombiazan'ny tolotra tsara ho anao sy ireo mpampiasa anao. Manana ny sehatra misy anay ihany koa izahay manana lisansy sahaza ho an'ny fiarovana ny tranokala. Miaro ny fampahalalam-baovao izahay amin'ny fampiasana ny fepetra fiarovana ara-batana, ara-teknika ary ara-pitantanana mba hampihenana ny loza ateraky ny fatiantoka, ny fampiasana tsy ara-dalàna, ny fidirana tsy nahazoan-dalana, ny famoahana sy ny fanovana Ny sasany amin'ireo fiarovana ampiasaintsika dia ny rindrankajy sy ny angona rakitra, ny fanaraha-maso ny fidirana amin'ny fidirana amin'ny aterineto, ary ny fanaraha-maso fahazoan-dàlana ahazoana alalana.
Tsy mivarotra na manofa ny mombamomba anao manokana, matihanina sy raharaham-barotra ho an'ny antoko fahatelo tsy miangona amin'ny tetik'asa ara-barotra raha tsy misy ny fanekenao mazava. Azontsika atao ny mampifandray ny fampahalalana miaraka amin'ny vaovao azontsika ary ampiasaintsika mba hanatsarana sy hanamafisana orina ny CompanyHub Platform. Amin'ny ankapobeny dia mampiasa sy mamoaka ny mombamomba anareo izahay araka izay inoantsika fa ilaina: (i) eo ambanin'ny lalàna, lalàna na fomba fandoavam-bola; (ii) hampihatra ny fepetra sy ny fepetra; (iii) hiaro ny zontsika, ny fiainany manokana, ny fiarovana na ny fananana, ary / na ny an'ny mpiara-miasa amintsika; ary (iv) hamaly ny fangatahana fitsarana, sampan-draharaham-panjakana, sampan-draharaham-panjakana, ary manampahefana hafa sy governemanta, izay mety ahitana manam-pahefana any ivelan'ny tanindrazanao.
Azontsika atao ny mizara ny antontan-taratasinareo manokana miaraka amin'ireo antokony fahatokisana toy ny:
Ireo mpikambana ao amin'ny ray aman-dreny sy ny sampany orinasa (miaraka ny orinasa fianakaviana) mba hanome mpiara votoaty, vokatra, sy ny tolotra (toy ny fisoratana anarana, varotra sy ny mpanjifa fanohanana), mba hanampy hamantarana sy hisorohana ny mety sy ny tsy ara-dalàna asa fanitsakitsahana ny politika. Ny mpikambana ao amin'ny fianakavianay dia hampiasa ity fampahalalana ity mba handefa anao fifandraisana amin'ny varotra raha tsy efa nangataka ny tolotr'izy ireo.
Izahay mizara ireo antontam-baovao amin'ny vondrona maneran-tany izay hitantanana, voafehin'ny antsika, na eo ambany fifehezantsika iombonana, mba hanomezana tolotra antsika.
Mizara fampahalalana amin'ny mpanome tolotra an-tserasera izahay izay manampy anay hanolotra ny serivisinay. Ny mpandraharaha mpanome fanampiana dia manampy antsika amin'ny zavatra toy ny fanodinana ny fandoavam-bola (izany hoe mpamatsy vola, banky fandoavam-bola), tranokalan'ny fampiantranoana, fanadihadiana momba ny angona, teknolojia fampahalalam-baovao ary ny foto-drafitrasa mifandraika, ny serivisy mpanjifa, ny fandefasana mailaka, ary ny fanaraha-maso sns. , toy ny fisorohana ny hosoka, ny varotra ary ny tolotra teknolojia. Ny fifanekena ataonay dia manondro fa ireo mpanome tolotra ireo dia mampiasa ny fampahalalana momba ny asa ataony ho antsika fa tsy noho ny tombotsoany manokana na ny fanitsakitsahana ny politikantsika manokana.
Miaraka amin'ny fampiharana ny lalàna, ny manampahefana ao amin'ny governemanta, na ny antoko fahatelo mifanaraka amin'ny filaminana, ny didim-pitsarana, na ny dingana ara-dalàna hafa na ny fepetra takiana amintsika na ny iray amin'ireo mpiara-miasa amintsika; raha mila manao izany isika mba hanaraka ny lalàna; na raha inoantsika, amin'ny fomba tokana ihany, fa ny fampitaovana ny mombamomba ny olona manokana, matihanina ary raharaham-barotra dia ilaina mba hisorohana ny fahasimbana ara-batana na ny fahaverezana ara-bola, mba hampahafantarana ny asa an-terisetra tsy ara-dalàna na hanadihadiana ny fandikan-dalàna hafa.
Azonao atao ny mangataka anay amin'ny fotoana rehetra mba hanovana, handefasana sy / na hanesorana / famafana ireo fampahalalana voatahiry miaraka aminay amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny support@companyhub.com. Hanao ny fangatahanay tsirairay izahay, arakaraka ny politikan'ny fitazonana anay, araka ny voalaza etsy ambany,
Afaka mandà ny Cookies izahay raha toa ny fahazoan-tseraseran'ny navigateur na browser anao, raha tsy takianay ny Cookies mba hisorohana ny hosoka na hiantohana ny fiarovana ny vohikala atrehinay. Na izany aza, ny fihenan'ny Cookies dia mety hanelingelina ny fampiasanao ny tranokalanay sy / na ny endriky ny serivisinay.
Raha tsy te-hahazo ny fifandraisanay mivantana na handray anjara amin'ny fivoriana izahay dia araho ireo torolàlana azo omena ao anatin'ny fifandraisana mba handosirana ireo fifandraisana toy izany amin'ny ho avy.
Raha tsy misy ny fangatahana fanafoanana ny mombamomba anao manokana amin'ny servery, dia mety voatery mitazona ny angon-drakitra manokana mandritra ny vanim-potoana izay ilaina amin'ny fanatanterahana ny adidintsika amin'ny fampiharana ny fampiasana raha tsy misy fepetra maharitra na takian'ny lalàna, Manatanteraka ny andraikitsika asongadina ato amin'ity Politika Fiarovana ity amin'ny fotoana rehetra. Fa mety hanatona antsika amin'ny fangatahana rehetra momba izany.
Raha manaiky ity politika ity ianao dia manaiky ny politikam-panangonam-bola momba ny fanangonana, ny politikam-piarovana ary ny fampiasana ny politikan'ny cookie araka ny voalazan'ity politika ity. Ho an'ny fanontaniana na ny fanahiana, mifandraisa amin'ny Customer Service / Privacy amin'ny support@companyhub.com.
Raiso ny fiaramanidina minitra 15 an'ny CompanyHub ary vonona ny ho faly
Andao e! 14 Andro fitsapana maimaim-poana. Tsy mila carte de crédit.
Fikambanana tsy mitady tombontsoa
azo jerena ao amin'nyApp Store
Raiso izanyGoogle Play
Copyright © 2018 CompanyHub. Zo rehetra voatokana.
Manomboka. Tsy mila fametrahana.
Ilaina ny anarana
Ampidiro adiresy mailaka valiana
Rehefa misoratra anarana ianao, dia manaiky anay politika fiarovana fiainan'olona ary Fepetra fampiasana
Azafady fenoy azafady mba hahazoana ny vidiny
Oops! Nisy hadisoana nitranga!